Ho fampivoarana hatrany sehatry ny asa tanana, nitombo indray ireo mpiantsehatra amin’ity sehatry ity. Mpiofana 88 nianatra momba ny ny tenona (tissage), rary (vannerie), korose (crochet), amboradara (broderie), zaitra (coupe et couture), rafitra vy (ouvrage metallique), tandroka (corne), fanodinana akora natoraly, mekatronika, fanodinana plastika sy akora sarotra levonina ho haingo (recyclage) no navoaka tamin’ny fomba ofisialy ny 07 Septambra 2017.
Andiany EZAKA. Andiany voalohany niofana tao amin’ny Ivon-toeram-pirenenan’ny asa tanana Malagasy (CENAM) ireto mpianatra notolorana ny fanamarinam-pahavitam-piofanana ireto.
Nitombo indray ieo mpiantsehatra ho fampiroboroboana ny asa tanana Malagasy. Ho fanohanana azy ireo , nanome voninahitra ny lanonana i Jean Jacques RABENIRINA, Ministry ny ny Kolotsaina, ny fampiroboroboana ny asa tanana sy ny vakoka sy i Alibena RAZAFITOMBO, Loholona sady mpanolontsaina maneran-tany misahana ny asa tanana, tomponandraikitry ny faritra Atsimon’ny Afrika.
‹ MARATHON INTERNATIONAL DE TANA: Les athlètes Malagasy sont prêts à décrocher le grand titre.	› CROIX ROUGE MALAGASY: Trano fonenana sy toerana azo antoka iatrehana ny loza voajanahary.